BisheshPati | Trusted Online News Protal in Nepal दुइबर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरुलाइ हटाउन ओली-प्रचण्ड सहमत! बर्तमान मन्त्रीमण्डलबाट को को हुने भए आउट? - BisheshPati
दुइबर्ष कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरुलाइ हटाउन ओली-प्रचण्ड सहमत! बर्तमान मन्त्रीमण्डलबाट को को हुने भए आउट?
बामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । तर, उनलाई अर्थ नदिइने भएको छ । गौतमलाई गृहमन्त्रीमा लान खोजिएको छ । बादललाई बिदा गरेर बामदेवलाई ल्याउन पनि दुई वर्ष मन्त्री भइसकेकालाई बिदा गर्ने मापदण्डको विषय उठेको हो ।-